EX - ABSDF: သဘောတရား နဲ. လက်တွေ.များ။
သဘောတရားရေးဆရာ ကြီး ( Aristotal 384 BCE – 322 BCE) က Democracy is when the indigent, and not the men of property, are the rulers. Inademocracy the poor will have more power than the rich, because there are more of them, and the will of the majority is supreme. Inferiors revolt in order that they may be equal, and equals that they may be superior. Such is the state of mind which creates revolutions. ဘာသာ ပြန်ခြင်သလိုသာ ပြန်ကြပေ တော. အဓိပါယ် ဖေါ်ခြင်သလိုသာ ဖေါ်ကြပေတော့။
နားလည်ခြင်သလိုသာ နားလည် ကြပေ တော.၊ ဒီလိုပြောရတာကလဲ လူတိုင်းဟာ ကိုယ်နားလည် သလို.ဘာသာပြန်ခွင့်၊ အဓိပါယ်ဖေါ်ခွင့် ရှိကြတယ် လေ။ ဒီကတော့ ရှာဖွေ တွေရှိတာလေး ကို မျှလိုက်တာဘဲ ။ ကိုယ်လိုရင်လဲသုံး မလိ်ုရင်လဲ သူများကို ဒါန ပြုလိုက်ပေါ့ ။ Aristotal စကားတွေကို စောဒက မတက်လိုပါဘူး။ သူနေ ရာက သူအချိန် ကာလ အလိုက်ပြောခဲ့တာဘဲ။